अभिनेत्री निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा आयो यति धेरै सुधार , निशाका बुवा भन्छन- छोरी बोल्न थालिन ! – Classic Khabar
June 14, 2021 279
नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ । उनका बुबा प्रेम घिमिरेका अनुसार निशाको पुनः उपचार सुरु गरिएपछि उनको स्वास्थ्यमा पहिलाको भन्दा धेरै सुधार भएको छ ।‘पहिला उसले केही बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । अहिले स्वास्थ्य सुधारोन्मुख हुँदैछ । म हिजो हस्पिटल गएर ‘छोरी के छ ? भनेर सोधेको थिएँ । उसले ‘हा’, ‘हो’ गरेर रुन खोजी’, प्रेमले भने, ‘म घर जान्छु, यहाँ भाइ बसेको छ भनेर फर्किएँ । सोचेभन्दा राम्रो सुधार भएको छ ।’
Prevबिहे गरेको २ बर्ष पछी दलित भन्दै श्रीमानले या तना दिएकी श्रीमती भन्छिन : ‘ मेरो शरीर संग खेल्न मात्र बिहे गरेको रहेछ ‘ हेर्नुहोस
९२ वर्षका वृद्ध कसरी खसे आफ्नै घरको छतवाट ? प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान
विवाहित महिलाहरु परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् किन ?